देशभरका नदीनालामा दोहन, जलस्रोत संरक्षण गर्ने कानून र निकायको माग
१७ असार, काठमाडौं । जलस्रोतको संरक्षण गर्ने कानून र निकायको अभावमा देशभरका नदीनालामा दोहन हुने क्रम बढेकाले यसको संरक्षण गरेर विकासका काम अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवा...
सुनसान बैतडीको पाटन विमानस्थल
१७ असार, बैतडी । सुनसान अवस्थामा रहेको बैतडीको पाटन विमानस्थल । यात्रु अभावको कारण देखाउँदै विगत तीन महिनादेखि यहाँको उडान सेवा बन्द रहेको छ । तस्बिरः विनोद सिंह विष्टररासस
आयोगमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता
१७ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।केही दिनअघि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ताका लागि निवेदन दि...
रोपाईका लागि खेत सम्याउँदै किसान
१७ असार, दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ मा रोपाई गर्नका लागि खेत सम्याउँदै किसान । जिल्लामा धमाधम रोपाइँ भइरहेको र हालसम्म ३० प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको छ । तस्बिर: कृष्ण न्यौपाने: रासस
इलाममा सवारी दुर्घटना हुँदा ११ यात्रु घाइते, चारको अवस्था गम्भीर
१७ असार, मङ्गलबारे । इलाममा सवारी दुर्घटना हुँदा ११ जना यात्रु घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङको थुम्बेदिनबाट झापातर्फ गइरहेको को १ ज ३३२९ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा सबै यात्रु घाइते भएका हुन् । इलाम न...
१७ असार, ललितपुर, काठमाडौं । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बीच मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका साथै शिक्षा सुधारका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ...
१३ लाख ७४ हजारकाे काजुदेखि कटुससम्म किनेर खान्छन् नेपाली
♦ रमेश लम्साल / नवीन पौडेल १७ असार, काठमाडौं । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात । नेपालका वनजङ्गलमा सहजरूपमा पाइने कटुससम...
♦सुशीला रेग्मी १६ असार, रामपुर । सिँचाइ अभावमा बाँझिएका जमिन अहिले हरियालीमय बनेको छ । हिजो सिँचाइ नहुँदा खेती गर्न छाडिएका बाँझो खेतमा हरियाली अन्नपात फलेको देख्दा हरिबहादुर रानाका आँखाबाट हर्षका...
nepalbahas.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
चट्याङ लागेर युवकको मृत्यु, दुई जना घाइते
१७ असार, बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिका-७ मा चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । चट्याङ लागेर २० वर्षीय धिराज प्रसाद यादववको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो । खेतमा काम गरिरहेको अवस्थामा उनलाई च...
पछिल्लो २४ घण्टामा ५० जना संक्रमित
१७ असार, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५० जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ८१४ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ५० जनामा संक्रमण देखिएको हो । परीक्षण गरिएकामध्ये ३५...
उपत्यकामा थप तीन जनामा हैजा, पुष्टि हुनेको सख्या १७ पुग्यो
१७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज थप तीन जनामा हैजा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनका अनुसार यो सङ्ख्यासँगै अहिलेसम्म उपत्यकामा १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको ...
तस्बिर अवलोकन गर्दै वाग्मतीका पर्यटनमन्त्री
१७ असार, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा दोलखा जिल्लाको विविधता झल्काउने खालका ‘फोटो मेला–२०७९’ अवलोकन गर्दै वाग्मती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ । जिल्लाक...
नेप्से पुनः ओरालो लाग्यो, आज दुई कम्पनीको शेयरमा सर्किट
१७ असार, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकको वृद्धि एक दिन पनि टिक्न सकेन । बिहीबार उच्च अङ्कले उकालो लागेको कारोबार मापक नेप्से पसिरसूचक आज भने पुनः ओरालो लाग्यो । नेपाल...
१७ असार, काठमाडौं । दिवाकर घले गुरुङ नेपाली यु–२० राष्ट्रिय टिमको टिम व्यवस्थापकमा नियुक्त भएका छन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले शुक्रबार महावीर क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङलाई यु(२० टिमको व...
१७ असार , कर्णाली । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुक दुई तहको सङ्घीय संरचनामा जानुपर्नेमा जोड दिए । राप्रपा नेपाल कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिद्वारा आज सुर्खेतम...
आयोगले भन्याे :- रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन !
१७ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भइनसकेको जनाएको छ ।केही दिनअघि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ताका लागि...
१७ असार, एजेन्सी । आफ्नो मनपर्ने कलाकारको जीवनका बारेमा जान्न जोकोही फ्यान उत्सुक हुन्छन् । फ्यानहरुलाई कलाकारहरूले कुन खानेकुराको सौखिन छन् भन्ने कुरामा झन चासो राख्छन् । यहाँ बलिउडका लोकप्रिय कला...
१७ असार काठमाडौं । बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशम...
वीरेन्द्रनगर मनसुनी विपद्को उच्च जोखिम, सरोकारवाला निकाय नै उदासीन !
१७ असार, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । कर्णालीको राजधानी भए पनि यहाँका नागरिक वर्षायाममा ढुक्कले निदाउन पाउँदैनन् । प्रदेशको राजधानी मानिएको वीरेन्द्रनगर मनसुनी विपद्को उच्च ...
nepalbahas.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पाँचलाख अफगान नागरिक घरबारविहीन हुने जोखिममा, जीविकोपार्जन जटिल
१७ असार, एजेन्सी । आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएकाहरूलाई उनीहरूको मूलघरमा नै पठाउने सरकारको बढ्दो दबाबका कारण करिब पाँचलख अफगान परिवार चाँडै घरबारविहीन हुने जोखिम बढेको छ । नर्वेजियाली शरणार्थी परिषद...
स्रोत नखुलेको ४५ लाख ९७ हजारसहित ४ जना पक्राउ
१७ असार, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका–१७ ड्यामसाइडस्थित भर्जु ईन होटलबाट स्रोत नखुलेको ४५ लाख ९७ हजार १ सय ८० रूपैयाँ नगद सहित ४ जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा ...
तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासियाे
♦ राजाराम कार्की १८ असार, काठमाडौं । सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा करिब रु २० अर्बको चामल आयात ...
nepalbahas.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
भेरी अस्पताल पुनः तीनमा कोरोना पुष्टि
१७ असार, नेपालगञ्ज । बाँकेमा तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा शङ्कास्पद तीन नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा आज उनीहरुमा संक्रमण देखिएको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्था...
सप्तरी, १७ असार । सप्तरीमा छ महिनाको अवधिमा ४४ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटना बढेको छ । इन्सेक सप्तरी शाखाले सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा अभिलेख गरिएको घटना सार्वजनिक गर्दै ...
आज गठबन्धन बैठक बस्दै, बागमती र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री फेर्ने तयारी ?
१७ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । सो बैठकमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । निर्वाचनको मिति घोषणा पूर्व नै बागमती र सुद...
१७ असार, काठमाडौं । ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नबिल बैंकले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को कार्यभार सम्हालेका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले ढुंगानालाई सीईओमा नियुत्त गरेको थियो ।...
१७ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले राष्ट्रियसभाको आजको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘आर्थिक विधेयक, २०७९...
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो लगानीले उपभोक्ता मारमा
१७ असार, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो खर्चले उपभोक्ता मारमा परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजना गरिएको इन्टरनेट ...
nepalbahas.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
१७ असार, बारा । अविरल वर्षका कारण भलपानीको बाढी पसर प्रभावित बनेको निजगढको जनजीवन सामान्य बनेको छ । वर्ष रोकिएर बाढी र डुवान घटेपछि जनजीवन समान्य बन्दै गएको हो । अघिल्ला दुई दिनदेखिको लगातार वर्षप...
नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ
१७ असार, खोटाङ । खोटाङमा ५ वर्षकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ परेका छन् । गत १४ असारमा नाबालिकालाई बाख्राको खोरमा लगेर मुख थुनेर जबर्जस्ती करणी गर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्स...
♦ रुद्र सुवेदी १७ असार, नेपालगञ्ज । बाँके प्रहरीले मालबाहक कन्टेनरबाट २५० बोरा अफिम ब्राण्डको पोष्टर दाना (अफिम सिड) नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । नेपालगञ्जबाट जमुनहा नाका हुदै भारतको...
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर कुरिलो खेती,लाखाै आम्दानी
♦टेकराज पोखरेल १७ असार, नवलपुर । भक्तपुरका जयराज ख्याजुले एक वर्षअघिदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिका–३ ब्रम्हस्थानमा व्यावसायिक कुरिलो खेती सुरु गरे । कुरिलो खेती सुरु गर...
१७ असार, मलङ्गवा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा गए राति गाडीको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा हरिवन नगरपालिका–११ कडरिया चोकका २४ वर्षीय जयबहादुर विक रहेका जिल्...
१७ असार, पोखरा । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको आयोजनामा स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिँदै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कपडाको चप्पल बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ । पोखरा महा...
१७ असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र हुने मुख्य उत्पादनको बिक्री मूल्य तोकेको छ । लगानी र मेहिनतको मापदण्डको आधारमा २३ वटा उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो । उपमेय...